जर्मन मूल प्रर्दशनको प्रयोग कसरी गर्ने
यदि तपाइँ जर्मन बोल्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँलाई आफ्नो मूल प्रवर्तकहरू थाहा पाउनुपर्छ। धेरै मूल प्रजाति शब्दहरू जर्मनमा सामान्य शब्दावली हुन्, जस्तै नाच (पछि, सम्म), वोन (द्वारा) को र mit (साथ)। ती बिना बोल्न गाह्रो छ।
बस राख्नुहोस्, मूल उपस्थितिहरु मूल मामला द्वारा शासित छन्। त्यो हो, तिनीहरू एक संज्ञा द्वारा पछ्याइएको वा मूल मामलामा एक वस्तु लिन्छन्।
अंग्रेजीमा, पूर्वनिर्धारित उद्देश्य उद्देश्य (उपस्थिति को वस्तु) ले र सबै पूर्ववर्ती एउटै अवस्थामा लिन्छन्।
जर्मनमा, उपदेशहरू थुप्रै "स्वादहरू" हुन्छन्, जुन केवल एक हो।
दुई प्रकारको प्राणी पेशाहरू
त्यहाँ दुई प्रकारका मूल उपस्थितिहरू छन्:
ती व्यक्तिहरू संधै मूलतया र अरु केहि पनि छैन।
2. केही दोहोरो वा दोहोर्याउने प्रसोधनहरू जुन मूल वा आरोप लगाउन सकिन्छ - उनीहरूले कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने आधारमा।
जर्मन-अङ्ग्रेजी उदाहरणहरू तल तल, दिगो प्रलोभनमा बोल्ड गरिएको छ। उपदेशको वस्तु इटालिकिनाइज गरिएको छ।
Mit der Bahn fahren wir। (हामी ट्रेनबाट जान्छौ।)
Meiner Meinung nach ist es zu teuer। ( मेरो विचारमा यो धेरै महँगो छ।)
यस होटल को लागि हाल नै मा बुकिंग कल। (होटल रेलवे स्टेशन बाट छ।)
यस कम्पैक्ट डिस्क देखि नमूना पटरिहरु । (उहाँले ठूलो कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ।)
Wir verbringen eine Woche am See । (हामी झीलमा एक हप्ता खर्च गरिरहेका छौ।)
माथिको तेस्रो र तेस्रो उदाहरणहरूमा ध्यान दिनुहोस् कि वस्तु पूर्वनिर्धारित (जस्तै गिग्नेउबर यो वैकल्पिक हो।) केहि जर्मन उपदेशहरूले यो रिवर्स शब्द क्रम प्रयोग गर्दछ, तर वस्तु अझै पनि सही अवस्थामा हुनुपर्छ।
मूल-मात्र प्रस्तावहरूको सूची
aus बाट, बाहिर
außer बाहेक अन्यका लागि
gegenüber बाट, विपरीत
Gegenüber यसको वस्तु अघि वा पछि हुन सक्छ।
mit संग, द्वारा
nach पछि, देखि
सीट किनकी (समय), को लागि
von द्वारा, बाट
नोट: जनसाधारण पूर्वनिर्धारित स्टट (यसको सट्टा), ट्रटज (बाहेक), während (अवधि) र wegen (को कारण) प्राय: बोल्ने जर्मन भाषामा विशेष गरी निश्चित क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाईं मिश्रण गर्न चाहानुहुन्छ पनि धेरै भ्रामक आवाश्यक छैन, तपाईं तिनीहरूलाई पनि मूलमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
Dative Prepositions को लागि सुझाव र ट्रिक्स
निम्न पदोन्नतिको साथ वाक्यहरू सिर्जना गर्दा के देख्नको लागि निम्नमा द्रुत अवलोकन हेर्नुहोस्।
प्लेसमेंट : तपाईं या तो "समय, तरिका, ठाँउ" वाक्य संरचना दिशानिर्देश दिमाग मा ध्यान रखते समय विषय + मौखिक वाक्यांश (अधिक साधारण) या पहिले आफ्नो पूर्वनिर्धारित वाक्यांश ठाँउ को चयन गर्न सक्छन्। त्यो अर्डर हो जुन तपाईले वाक्यको यी भागहरू राख्नुपर्छ। उदाहरणका लागि:
Ich fahre morgen früh mit meinem neuen Auto nach Cologne। (म भोलि बिहान कोलोनमा मेरो नयाँ कारको साथ ड्राइभिङ्ग गर्दै छु।)
कारणहरू : तदनुसार शब्द समाप्ति परिवर्तन गर्नुहोस्। आफ्नो निश्चित लेख , अनुमोदन र adjectives जाँच गर्नुहोस्। एक मूल अवधारणात्मक वाक्यांश मा यस अर्थ:
मरे - der
दास - डे
मर (बहुवचन) - डेन
ich - mir
du - dir
er - ihm
es - ihr
मूल प्रर्दशनकालीन कन्फिगरेसन
निम्न मूल prepositional संकुचन सामान्य हो।
बीम (bei + dem)
उदाहरणको लागि: डाइन एलेन कम्युनिस्ट ह्यूट ज्यू अडेन्डेसन वोरबी। (तपाइँका आमाबाबुले आज रात्रि खानाको लागि आउँदै हुनुहुन्छ।)
(डाइरेक्टरी) को लागि, यस मामला मा, जु प्लस डे, या जम (Abendessen) संग व्यक्त गरिएको छ। सोचाइ हामीले जु प्रयोग गर्नुभयो? फोर र फर को बीच मतभेद हेर्नुहोस्।
जापानीमा गणना गर्दै
जर्मन प्लटलल अनुकरणको लागि मार्गदर्शक साथ-साथ समाप्त हुन्छ
इटालियन Verb Conjugations: डेडिडेर
स्पेनिश मा भविष्य मा छलफल गर्ने तरिका
कसरी कन्जुगेट 'निरन्तरता' (जारी राख्न)
इटालियनमा पशु आवाज
'सेर' को संकरण
इटालियन Verb Conjugations: Truccarsi
समय अभिव्यक्ति र टेनिस
/ सक्षम हुन सक्छ
टाइमलाइन: एटिला हन
जीवनी र चाड म्यान्से प्रोफाइल
Wartburg College GPA, SAT र ACT Data
हामी यी पूर्णतया विचित्र स्टक छविहरूको लागि एक व्याख्या मांग्दछौं
KOVACS उपनाम र मूल नाम
पीजीए टूरमा स्यान्डसनसन फारम च्याम्पियनशिप टूर्नामेंट
फेस क्लिमिङको लागि छ आधारभूत फिंगर गिप्स
पाइयोटर टोचेकोस्कीको प्रोफाइल
2006 जीप वांगलर असीमित 4X4 समीक्षा
व्यापार बैठक रनिंगको लागि उपयोगी अंग्रेजी वाक्यांशहरू
एशियाई अमेरिकी कालो पानाथर रिचर्ड आकीको जीवनी
7 को लागि समय प्रबंधन व्यवस्थापन युक्तिहरू
भारी पानी तथ्यहरू
फ्री आवधिक तालिका वालपेपर
संक्षिप्त नाम (नामहरू)
सेप्टेम्बरको लागि प्रार्थना
मिसिसिपी जीपीए विश्वविद्यालय, एसएट र एक्ट डाटा
विशेष संस्करण स्टार वार्समा परिवर्तनहरू: प्रकरण IV: A नयाँ आशा